Sidee baad u bogsan xogta ka wadid aad u adag in aad laptop? No, uma baahnid inaad si loo eego sida caadiga ah aan sidaa yeelno, markii aad laptop waxaa ka shaqeeya ganaax. Si kastaba ha ahaatee, waxa haddii aad ogaato in laptop ayaa joojiyay ka shaqeeya? In dhacdadaas oo kale, sida kaliya ee lagu badbaadin xogta aad u qaali ah waa in ay u wareejiso ka drive laptop ee ay adag tahay in laptop kale ama computer.
Hard disk waa qaybta ugu muhiimsan ee u laptop kasta waxa ku jira oo dhan xogta lagama maarmaanka u shaqeeyaan aad xogta ganacsiga iyo shakhsi. Haddii laptop helo dhintay way adag tahay inuu ka soo kabsado, laakiin aan wax walba waa laga badiyay. Waxaad soo kaban karto xogta iyo here jira laba hab oo kaa caawin doona in aad soo kabsado xogta aad.
Sida loo sameeyo dib u soo kabashada xogta laptop marka laptop waa dhintay?
Haddii aad laptop waa dhintay iyo aad rabto in aad u baahan tahay ka waxaad u baahan doontaa in aad qaadatid drive adag ka laptop ka dibna ku xirmaan computer kale oo ay u helaan. Si kastaba ha ahaatee, ma aha fudud badan waxa codadka sababtoo ah waxa ay ku lug yeelan doontaa furitaanka aad laptop. Haddii aad qorshaynaysid in la dayactiro aad laptop markaas uma baahnid inaad rabto in aad u dhaawici. Si kastaba ha ahaatee, haddii aad u raac tallaabooyinkan aad si ammaan ah ku qaadan kartaa wadid aad u adag.
Fur guddiga dambe ee aad laptop, oo xidhaa drive adag. Sida caadiga ah waxaa had iyo jeer waa guddi ka badan disk adag tahay in la kala saaro waxa. Dhammaan laptops ay leeyihiin meel oo kala duwan oo disk adag, si aad u ogaato laptop ee.
Ha welwelin ma jirto walax taararka in aad yeelan doontaa in la qaban. Sida caadiga ah waxaa jira qafis ama in tuurid disk adag xaq u baxay tabs.
Marka disk adag waa ka baxay, waxaad u baahan doontaa interface USB Timid drive adag ah. Online Waxaad ka iibsan kartaa. Interface wuxuu kuu ogolaanayaa inaad isku xiro disk adag la computer la USB.
Hadda xirmaan disk adag oo la isticmaalayo cable USB Timid interface in computer kasta ah.
Haddii disk adag ayaa ka shaqeyneysa ganaax, waxaa la ogaan doonaa sida qalab lagu kaydiyo USB oo aad gacanta nuqul karaan dhamaan faylasha loo baahdo.
Ka taxaddar marka aad ka soo baxdo disk adag. Read buuga saarayaasha haddii loo baahdo oo ku saabsan sida furan iyo Macdan drive adag ama wac farsamo ah si ay kuu caawiyaan.
Sida loo sameeyo dib u soo kabashada xogta laptop ah haddii laptop weli ka shaqeeya?
Haddii ay dhacdo in aad laptop waxaa ka shaqeeya ganaax laakiin disk adag oo aan haysan faylasha aad doonayay. Haddii ay tirtiray si qalad ah ka dibna, ha ka welwelin. Waxaa jira xal kaamil ah loo yaqaan Wondershare software Data Recovery. Tani waa software si sahlan loo isticmaali oo ka dhigaysa habka dib u soo kabashada siman. Full Version waxaa laga iibsan karaa website-ka rasmiga ah, laakiin waxa kale oo aad isku dayi kartaa version xor ka ah website-ka. Waxaa jira labada version Mac iyo Windows. Halkan waxa ku jira qaababka ay:
-It Soo kaban karto, dhammaan macluumaadka nooca ay ku jiraan waraaqaha, warbaahinta, files eedeysanuhu, fariimaha ama emails, archive iyo qaar badan.
Waa digniin software la shaqeeya cayn kasta ah qalab lagu kaydiyo sida USB, fiidiyo, kaararka xusuusta, drives adag, recycle haamaha iwm
-Haddii Xogta lumo shil, weerar virus, inayna tirtirto, formatting, howlgal aan habboonayn iyo qaar badan.
-Software Waa wax fudud oo ammaan ah si ay u isticmaalaan. Waxaa dhib uma keeni doonto computer iyo siinaysaa interface fudud ee habka soo kabashada.
Software Tani waxay u shaqeeya labada Mac iyo daaqadaha. Download version kala oo ku xidh on your computer. Ma jirto wax weyn si aad u barato sida loo isticmaalo software sida waxa uu leeyahay interface dareen iyo habka fudud in ay tahay is-sharaxaadda. Waxaad soo kaban karto xogta aad la kaliya seddex tallaabo.
Saddex tillaabo looga soo kabsado xogta ka laptop drive adag isticmaalaya Wondershare Data Recovery:
Download version kala for your computer, ku rakibi on your computer. Hubi in dhammaan barnaamijyada socda ka disk adag oo aad rabto inuu ka soo kabsado xogta off yihiin. Burcad software, oo markaas waa inay lumay doorasho Recovery file oo ah kan ugu horeeya liiska.
On screen soo socda, waxaad arki doontaa liiska qoruhu ama aaladaha kaydinta ku xiran your computer. Raadi disk in aad rabto in aad iskaan for files lumay oo ay doortaan. Waxaa jira doorasho kala duwan scan sida dhamaystiran scan iwm mid aad rabto in aad isticmaasho Dooro. Hadda riix sawirka.
Sug scan ku dhammayn. Waqtiga ay qaadato ku xirnaan doonaa xajmiga kaydinta disk ah. Marka geedi socodka la dhammeeyo. Waxaad arki doontaa liiska faylasha recoverable. Iyaga Guudmar haddii aad rabto in aad ka hor inta aadan soo celin. Dhex mara liiska, calaamadee dhammaan faylasha in aad rabto in aad soo kabsado. Waxa kale oo aad xaaladda ay ku sugan, taasi oo ka tarjumaysa tayada file uu noqon doono ka dib markii uu soo kabashada karo. All inaad samayso hadda guji Start.
Dhammaan faylasha u soo on your computer goobta gaar ah ku xiran tahay meesha uu soo saarka default software.
Talooyin si looga hortago in aad laptop ka soo gaartay xogta
Dib -Always ilaa xogta aad midkood daruur ama ku disk adag oo kale.
Aawadood in aad isticmaasho antivirus in ay sii weerar virus iska.
Software utility -Use sida soco ilaa aad disk adag oo caafimaad qaba.
-Avoid Wax lama filaan ah ama hawl dhufatid la your computer.
Kuwani waa uun qaar ka mid ah hababka ugu fiican si loo hubiyo in xogta aad weli ammaan ah, xataa haddii aad laptop ma. No more wax xaganaya oo ku saabsan xogta laga badiyay abid - xogta halkan waa inuu kula joogo.
> Resource > Hard Drive > Laptop Data Recovery - Sidee inuu ka soo kabsado Data ka Hard Drive in ay Your Laptop